Tuesday July 10, 2018 - 14:31:20 in Wararka by Xarunta Dhexe
Ronaldo ayaa soo gaba gabeeyay 9 sano oo uu usoo ciyaarayay kooxda caanka ah ee Real Madrid, muddadaasi wuxuu muddadaasi noqday laacibka ugu goolasha badan Real Madrid isaga oo dhaliyay 451 gool. Sidoo kale wuxuu noqday laacibka aduunka 4 jeer intuu uu xirnaa shaarka Real Madrid.
Ronaldo oo ah 33 jir, wuxuu Real ka caawiyay in ay ku guuleysato 4 koob oo ah koobka Kooxaha Horyaalada Yurub.
Saxiixa Ronaldo ayay Juve uga dhigantahay in ay aad u daneyneyso in ay qaado koobka Kooxaha Horyaalada Yurub. Juventus ayaa saddex jeer giitsatay finalka koobka Yurub shanti sano ee lasoo dhaafay.
Waxaa ugu danbeysay hanashada tartankan sannadk1996. Laakin tan iyo sannadki 2012-ki iyada ayaa ku guuleysaneysay horyaalka Talyaaniga.
Ka tagista Ronaldo ee Real Madrid, kaliyah jab kuma ahan kooxda ka dhisan magaalada Madrid, ee waxay kaloo dhabarjab ku tahay horyaalka Spain ee La Liga oo horay u lumiyay ciyaaryahan Naymar oo sannadki hore ku biiray kooxda Paris St Germain.
Xog:-Sarkaal Ka Tirsan Ciidanka Dowlada Soomaaliya Oo Ku Biiray Ururka Al Shabaab
06/10/2016 - 22:03:01
Gabar 17-sano jir Soomaali ah oo la qabtay iyada oo ku biiraysa ISIS
10/12/2015 - 01:01:40
Al-shabaabki ku biiray ISIS oo u baxsanaya Buuraha Gal-gala
21/11/2015 - 01:38:21
18/10/2015 - 13:09:06
Ardayda Kenyaanka ah oo si xowli ah ugu biiraya Alshabaab
15/10/2015 - 19:53:08
29/07/2015 - 00:04:40
Fanaanka reer Germany ee Denis Cuspert oo ku biiray Xoogaga Daacish (Daawo Sawirada)
19/02/2015 - 00:10:28
23/12/2014 - 10:07:08
Juventus & Napoli Oo Caawa Isku Herdinaya Finalka Koobka Suppercoppa + Ciyaariyahano Sheegay In..
22/12/2014 - 14:56:39
Leonel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo tababar adag qaadanaya + Sawirro
16/11/2014 - 23:24:09